Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Qodobadii Gundhiga u ahaa Asaaskii SNM Iyo Dhagarihii Qarsoonaa Oo Qarxay (Maqal)
Qodobadii Gundhiga u ahaa Asaaskii SNM Iyo Dhagarihii Qarsoonaa Oo Qarxay (Maqal)
Nov 28, 2012 ENTERTAINMENT 4
Qodobadii Gundhiga u ahaa ururkii SNM ee Maamulka Hargeysa dhalay iyo hirgalinta dhagarihii qarsoonaa oo muuqda. Halkan Ka Dhageyso
Fadhi Xaasaasi ah: Cod Maanta Loo Qaadayo Aqoonsiga Falastiin Iyo Reer Galbeedka oo ku kala qeybsamey Taageerida Aqoonsiga Wadanka Falastiin Breaking News:- Jabhad Lugu Magacaabo GDAL MOVEMENT oo Lagu Dhawaaqayo
4 thoughts on “Qodobadii Gundhiga u ahaa Asaaskii SNM Iyo Dhagarihii Qarsoonaa Oo Qarxay (Maqal)”
ABDI AHMED 12/04/2012 at 4:32 pm
KKKKKKKKKKK MAXAA KUU DIIDAY DACAWLEY MA LAABTAAD KA JECLAATAY LAYAANKA LIBAAX SANAAG IYO MIDNA MAAD SAWIRINE CAGA DHIGO BILAASHBAAD LIBAAXA U JECESHEE
libaaxa hawd 11/29/2012 at 12:45 pm
waan idin salaamay dhamaantiin.
waan raacsanahay in sidii dadka lootusi-lahaa khaladaadka jira ee ah xaqdarooyinka aanay wali samayn dawladii Siyaad iyo qabiilkiisii aanu samaynay oo ah dalka boobis aduunka iyo awoodaba. Waxase jirta inaanan udhamayn ee ayku koobantahay qayb nagamida iyo tuugta uu uhoreeyo Siilanyo. Waxaan idinkula talinlahaa nakalareeba.Hadii aydhacdo inlagasoo horjeesto cuqubadan waxaan ahay ka ugu horeeya ee arin iyo adduunba kubixiya, waanka xumahay in magacii aan waxkulahaa kusuntanaado xaqdaro iyo eex waa inaanu idin tusno inaanan laqabin ee aanu iska maydhnaa magac xumaanta iyo ceebta nalaga dhigay soomali kuwii ugu cadaaladda xumaa ee abid soomara sikastaba ha ahaatee waanu kujiraa waxkasta oo xaqloogu qaybsado iyo cadaalad ama federalka hanoqoto ama somaliland hanoqotee.
libaaxa hawd 11/29/2012 at 12:30 pm
Asc Aniga oo kasoo jeeda gobolka sanaag iyo togdheer ilaa hawd ayaan waxaan qirayaa in reer awdal xaqdaro farabadan oo cadaan ah lagusameeyey, oo aanay geyin kuwaas oo ah in dawladda lagasiiyey Maqas aykufuraan guryaha shicibku dhisto. Dilkii dadkii lagawracay iyo xasuuqii kahoreeyey ragii loo haystey sida Abiib iyo Janankii ciidanka oo kusii dalacay danbigaysameeyeey.
Reer Awdalow abaalkiinii aad dalkan iyo dadkanba ugasheen laydinma marin, xaqdarada iyo cuqubadaana waxaa lagugalay magacayga oo beesh dhexe ah waxaan idinleeyahay waanu idinkula jiraa waxkasta oo xaqiina iyo kaygaba aynu kuhelayno. Anigu dawladii SIyaad waan nebcaa tan Somaliland kajirtaan kasii nebcahay illaa maalintii ay yidhaahdeen waa go’nay. Iadoonay ahayn oo SNM sharcigeedu ahayn go’itaan ee ay ahayd federalism.
Diirie 11/28/2012 at 10:30 pm
Waa xaqiiq biyo kama dhibcaan ah, walee way qaraxday.
Tabikal waa sida ay wax u socdaan, miyaanad arkayn sida beelaha darifyada looga curyaamiyay siyaasada iyo dhaqaalaha.
Bal eeg maamulka la sheegayo inuu soomaaliland ka dhexeeyo ee ay beesha snm gacanta kuwada hayso hadana ay doonayso in sidaa sacabka loogu tumo.
Bal u fiirso mashaariicda horumarinta ee dunidu ku bixiso gobolada waqooyi meelaha gaarka ah ee wax lagaga qabto, waa hargeysa burco iyo berbera. Madaarada wadooyinka iyo dekadda iyo beeraha.
Cagafyada iyo mashiinada iyo Riigaga burco bari uma dhaafaan, gabileyna galbeed uma dhaafaan.
Dhaqaalaha: looma ogola golada kale inay samaystaan xataa deked macmal ah, Madaaro ama Airportkooda waa la curyaaminayaa lamaba ogola. Berbera iyo hargeysa inay dadku ku xidhnaadaan baa la rabaa.
Ganacsigu waa la mid oo markaad wax lasoo degto ama aad dhoofi istidhaa waxa lagu saarayaa cashuur laba jibaar ah.
Marka soomaliya lala hadlayo ama caalamka iyaga uunbaa is urursanaya, lama ogola cid beelaha kale ah.
Ciidanka qalabka sida iyo tignikada looma ogola askar kasoo jeeda beelaha kale, wixii kaga jiraa waa askari afantari ah.
NGO-yada u fiirso, dhaqaalaha wadanka hargeysaa lagu cunaa.
XIsbiyada eeg, golaha wasiirada eeg, golaha baarlamaanka eeg, madaxda mitariga iyo booliska eeg.
Dhulbalaarsiga iyo cagajuglaynta eeg.
Waxa la fulinayaa 8 da qodob ee snm u qoran.
WAAR HOOY HURDAAYOOW IMIKABA OGOW. Alaahu ma balaqtu